Internet zvinhu (IoT) Isu takangofungidzira mhuka dzinovaraidza dzichitaura nesu asi wakambofungidzira here imba yako ichitaura newe kana mota yako, musuwo uchitaura nemagetsi ekuchinja! Indaneti yakaita kuti izvi zvikwanisike kubatanidza chero zvese zviripo zvakatipoteredza. Iyo firiji, muchina wekuwachisa, microwave uye kunyange mapoto, ikozvino hapana chinhu chisina kubatika nenyika yedhijitari.
Midziyo yemumba smart inobvumidza varidzi kudzora uye kutarisa huwandu hwakawanda hwekutenderera senge yakavandudzwa yekutarisisa imba, kudzora kwekuwana, chengetedzo, uye kugona simba. Mhando zhinji mu dzimba dzakangwara vari kubatana pamusoro pezvakasiyana-siyana zvemidziyo kuti zviite zvine hungwaru, zvinobudirira uye zvakachengeteka. Midziyo mizhinji yakadai saEskesso, Samsung smart firiji uye Genican iri kuwedzera zviri nyore kune hupenyu hwemunhu wese munzira dzakanakisa. Amazon Echo chimwe chishandiso chakangwara chinoshanda seCPU kune ako ese gadget gadget. Chimwe chakakurumbira chishandiso Kudzidza Thermostat, inogadzirwa neNest, inogadzirisa otomatiki tembiricha yeimba kuburikidza nemaseru akadzika. Izvi zvishandiso zvinodhura izvozvi, nekuda kweyekuvandudza mitengo uye kutengesa kwakaderera. Asi nekufambira mberi kwakawanda, mitengo inotarisirwa kudonha ichivaita kuti vawedzere kudhura kune wepakati mutengi. Munguva pfupi tinogona kuonawo vabatsiri vega uye marobhoti achifamba mukati medzimba medu uye ichi chinongova chikamu chidiki chidiki icho IoT iri kuzoshandura. Kunyangwe mu nezveutano indasitiri, IoT iri kugadzira mucherechedzo. Pfungwa ye 'smart mibhedha' iri kuitwa muzvipatara zvishoma zvinogona kuona kufamba kwemurwere uye kugadzirisa kukwirira zvinoenderana kuitira kuti pasave nekudiwa kwavanamukoti kana kupindira kwevanhu. Kune zvakare varapi vekumba vanogovera iyo nzira kana mishonga ikatorwa nenguva kana kwete nerubatsiro rwe data rakachengetwa mugore. Hutano ruzivo rwevateveri vanobatsira nemurwere-chiremba kudyidzana vari kuvhurawo nzira dzehungwaru zvishandiso kuendesa mibairo mikuru mumunda we nezveutano. Iine tekinoroji inotanga kushandiswa kwese kwese, ichatora mibairo mikuru nekudzikisa mutengo, mhedzisiro yakagadziriswa yekurapa, ruzivo rwevarwere rwakawedzerwa, zvikanganiso zvakadzikiswa, kusimudzira manejimendi ezvemishonga uye nekuvandudza manejimendi ekurapa.
Kunze kweIoT kushandiswa dzimba dzakangwara, akangwara chibatiso hurongwa kana midziyo yesimba inopa nyaradzo uye kugara zvakanaka kwemunhu, yafambira mberi pakuita kuti maguta ave nehungwaru. Nechinangwa chekubatanidza hungwaru uye ruzivo nemidziyo, makambani akasiyana ari kushanda kumisa network yemidziyo yakabatana. Kusanganiswa kwe analytics, big data, uye kubatanidza kwese kwese kuri kuunza hukuru hutsva hunogona kuita sekudzora nekugadzirisa zvishandiso, kugona kutarisa kure uye kuvaka ruzivo kubva mukuwanda kwedata. Nekudaro IoT irikushingairira kushandura zvivakwa zvemaguta zvachose nekudzikisa kutsvikinyidzana kwemigwagwa, kusimudzira zvifambiso zvevoruzhinji, kugadzira masevhisi ekanzuru anoshanda uye anodhura uye kuchengetedza vanhu vakabatikana uye vakachengeteka. IoT iri kubatanidza huwandu hwemidziyo yakangwara zuva rega rega uye mumakore anotevera, tinenge takakomberedzwa neanosvika 24 bhiriyoni. IoT zvishandiso. Zvino ndiwo mamwe makuru nhau! Kunze kwaizvozvo dzimba dzakangwara, smart magetsi-ekuchengetedza masystem, akangwara zvishandiso zvakare anobatsira vanhu kuteedzera yavo yega hutano neyakavandudzwa uye izere mishonga mhedzisiro. Dzakabatana mota dzinobatana neiyo infra yemaguta akangwara kuchinjisa nzira dzakajairika idzo dzakatevedzwa nevatyairi pakutanga. Asi nezvakanaka izvi zvinouyawo nenjodzi.
Kubviswa kwedata - yakawanda data iri kuwedzerwa sekondi yega yega ne IoT zvishandiso uye izvi zvinonyatso kugadzira nzvimbo dzekupinda dzevabati vepamhepo
Ruvimbo rweveruzhinji - Muna 2015, Control State yeiyo Smart Home yakaona kuti vanhu vaishushikana zvakanyanya neruzivo rwavo kubiwa kubva dzimba dzakangwara. Ichi chingave chimwe chikonzero chikuru nei vatengi vasingachinjike kuIOT zviri nyore. The Internet Zvinhu ndiyo inotevera nhanho ye kushandisa michina uye kubuda kwehunyanzvi hutsva huchavandudza zvinhu zvakawanda zvehupenyu hwedu kungave kubasa kana kumba. Gore rino raizoona IoT ichikura kuita maindasitiri emadhora akawanda indasitiri chete kana kuchengetedzeka uye kunetseka kwehukama kuchitariswa.